Akaibata nemaoko maviri ndokuipinza mukati zvinyoro nyoro! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Akaibata nemaoko maviri ndokuipinza mukati zvinyoro nyoro!
Mboro yangu ihombe uye yakachecheudzwa saka paakazoiti dzvii, mwana akakanuka kuti Ahh, ndokubva adaidza zita rangu softly achibva adzika kunonanzva muzvambarara wezimboro rangu, ndakamurega achiita hunyanzvi hwake nerurimi pamboro yangu achipinza rurimi rwake pakaburi kemboro achinzwa kuvavirira kwetumisodzi twayo tweshungu, apedza akasimudza chiso chake kuti ndimutarise mumaziso.
Previous articleNdakaona rino gobvu rine mazitsinga rakamira ndikabva ndatota nekuda kuiswa ipapo!
Next articleNdainzwa matinji ake achiita kuidhonzera mukati kuti isabude!